सचेत क्रान्ति के हाे ? - समय-समाचार
सचेत क्रान्ति के हाे ?
रुपान्तरणका आधारहरू भनेका प्रकृतिप्रेम, मानवता, सामाजिक न्याय र साधना आदि हुन ।
सुदर्शन जाेशी "तेजस्वी" बुधबार, २०७८ जेठ १२ गते, ०७:४५ मा प्रकाशित
जसरि प्रत्येक व्यक्ति सुख, शान्ति र समृद्धि चाहन्छ, त्यसरि नै सचेत क्रान्ति एक साेच हाे जसले दिगाे आनन्द, असलता सहितकाे सफलता चाहन्छ । तर चाहेकाे उदेश्य पुरा गर्नका लागी प्रत्येक ‘म’ ले अरुलाई दाेष लगाउन छाेडि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक एकरुपतामा नै रहि केहि जीवनशैलीरुपी आधारहरुमा रहन जरूरी छ।
ती रुपान्तरणका आधारहरू भनेका प्रकृतिप्रेम, मानवता, सामाजिक न्याय र साधना आदि हुन । यसकाे विधिकाे रुपमा संघर्ष, एकता, विकास, न्याय र संगठनलाई लिईएकाे छ । जसमा शान्तिपूर्ण संघर्ष, सहभागितामूलक एकता, दिगाे माैलिक विकास, व्यवहारिक सामाजिक न्याय र सर्बाेच्च विश्वव्यापि संगठन पर्दछन ।
प्रत्येक ‘म’ ले जन्म देखि मृत्यु सम्म संघर्ष गर्नु पर्दछ । याे सबैलाई थाहा छ । किनकि प्रत्येक ‘म’ काे जन्म, जीवन र मृत्यु नै रुपान्तरण हाे । त्यसैले असलताका लागी संघर्ष गर्ने धेरै ‘म’ हरु काे एकता आवस्यक छ ।
उदाहरणकाे रुपमा यही काेराेना कहरलाई करुणाकाे गाउँ शहरमा वदल्ने प्रयत्नलाई सामुहिक प्रार्थना गर्ने विषयकाे रुपमा लिन सकिन्छ। त्यही रुपान्तरित ‘म’ हरुकाे एकताले दिगाे विकास गर्दछ । त्यस विकासले समाजमा सबैलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि याे सत्यमतकाे यात्रा हाे । यसले ‘म’ रुपान्तरित हुँदै शून्य देखि ब्रह्माण्ड सम्म पुग्ने उदेश्य राख्दछ । यसकाे पूरा रुप भनेकाे पल-पल पाईला-पाईलामा सचेत क्रान्ति तेज हाे ।
प्रत्यक ‘म’ ले आफ्नो जीवनरुपी यात्रा अहिले नगरे कहिले गर्ने र मैले नगरे कस्ले गर्ने भन्दै पल-पल पाईला-पाईलामा हाेसमय हुने, बाेध गर्ने, प्रखर रहने, थाहा पाउने, खाेज गर्ने र सचेत रहने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । याे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबैकाे रुपान्तरण हाे । यसमा सचेत शब्दले चेतनाकाे र क्रान्ति शब्दले पदार्थकाे प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
तेज शब्दले अपाे दिपाे भव, स्व-हम मा रहि आन्तरिक र बाह्य संसार चल्ने ज्याेति, प्रकाश, ज्ञानवाट हाे भन्ने वुझाउछ । ‘म’ शब्द ले आकास, वायु, अग्नि, भूमि र जल (पञ्चतत्व)काे प्रतिनिधित्व गर्दछ। सत्कर्म, प्रेम, सेवा, करुणा, सकारात्मकता, सृजशिलता र आत्मनिर्भरमा रहने प्रयत्न गरि मानवियताकाे कुनै सिमा हुँदैन । वसुधैव कुटुम्वकम, बाचौँ-बचाउँ, हासौँ- हसाउँ जस्ता आयामहरुमा जीवनलाई प्रयाेग, उपयाेग र सदुपयाेग गर्ने साेच नै सचेत क्रान्ति हाे ।
(लेखक शाकाहारी अभियन्ता, याेग साधक, कानुन व्यवसायी, सडक वेवारिसेकाे सेवक एवं उत्प्रेरक हुन ।)
नेपाल विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना कार्यशाला सुरु